Apache CloudStack 4.15 inosvika iine nyowani webhu interface, kugadzirisa uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Apache CloudStack 4.15 inosvika iine nyowani webhu interface, kugadzirisa uye nezvimwe
Iyo itsva vhezheni yeplatform chikuva "Apache CloudStack 4.15" yakatoburitswa kare uye mune iyi vhezheni itsva shanduko dzakasiyana siyana nekuitwa zvinooneswa senge nyowani webhu interface, pamwe nekuvandudza kune vSphere yekuchengetedza rutsigiro, pakati pezvimwe zvinhu.
Kune avo vasingazive Apache CloudStack vanofanira kuziva izvozvo iyi chikuva inobvumidza kuendesa kuendesa, setup uye kugadzirisa yezvakavanzika, yakasanganiswa kana yeruzhinji zvigadzirwa zvegore (IaaS, zvivakwa sevhisi).
Iyo CloudStack chikuva chakaendeswa kune iyo Apache Foundation naCitrix, iyo yakagamuchira chirongwa ichi zvichitevera kuwanikwa kweCloud.com. Iyo yekuisa mapakeji akagadzirirwa CentOS uye Ubuntu.
Cloudstack hazvibvi parudzi rwe hypervisor uye inobvumidza kushandisa Xen (XCP-ng, XenServer / Citrix Hypervisor uye Xen Cloud Platform), KVM, Oracle VM (VirtualBox) uye VMware pane imwecheteyo gore zvigadzirwa. Iyo webhu interface uye yakasarudzika API inopihwa kubata mushandisi base, kuchengetedza, komputa uye network zviwanikwa.
Mune yakapusa kesi, iyo CloudStack-yakavakirwa gore zvivakwa ine inodzora sevha uye seti yemakomputa node, pane iyo muyenzi anoshanda sisitimu inomhanya mune yehunyanzvi maitiro.
1 Apache CloudStack 4.15 Kiyi Nyowani Zvimiro
2 Maitiro ekuisa Apache CloudStack paLinux?
Apache CloudStack 4.15 Kiyi Nyowani Zvimiro
Mune iyi vhezheni nyowani yakaratidza imwe yeshanduko dzakakosha ndeyekuti iyo nyowani yewebhu interface inopihwa nekutadza, kunyangwe iko kugona kwekushandisa iyo yekare interface kuchiri kuchengetedzwa uye kuchisara senzira yakarongwa kubviswa mushanduro 4.16.
Imwe yeshanduko inomira pachena mune maturusi ekushandisa kuchengetedza kwe vSphere umo rutsigiro rweVMware, vSAN, VMFS6, vVols matura ekuchengetedza akawedzerwa uye VMware masango ekuchengetera.
kunze kwaizvozvo matemplate akawedzerwa kuendesa VMware chaiwo michina nerutsigiro ruzere rweparameter dzakapasiswa mumafaira eOPV uye a noVNC koni inosanganiswa yekukurumidza kuwana kune chaiwo muchina nyaradzo.
Zvakaiswawo mune iyi nyowani vhezheni ye Apache CloudStack 4.15 pa rutsigiro rweCentOS 8, Ubuntu 20.04 uye XCP-ng 8.1 kugoverwa, pamwe neMySQL 8 DBMS uye yakawedzera rutsigiro rweRedfish standard, iyo inotsanangura RESTful interface yekumusoro manejimendi manejimendi manejimendi.
Yeimwe shanduko dzinomira yeiyi nyowani vhezheni yeApache CloudStack 4.15
Iwo mapurojekiti akagadza rutsigiro rweanotungamira-based user rights management (RBAC).
Wakawedzera mamwe maturusi ekuchengetedza manejimendi.
Yakawedzera rutsigiro rwemashini chaiwo michina.
Kune L2 network, PVLAN rutsigiro inoitwa.
Wakawedzera kugona kubhootisa mugadziri yemahara muBIOS (VMware).
Sevhisi yakagadziridzwa kugadzirisa iyo midzi disk.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo yeiyi nyowani yakaburitswa vhezheni, unogona kutarisa iyo ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa Apache CloudStack paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa Apache CloudStack pUnogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Apache CloudStack inopa akagadzirira-akagadzirwa ekuisa mapakeji eRHEL / CentOS uye Ubuntu. Saka kuti udzivhure, tichaenda kuvhura terminal uye nekuita zvinotevera mairi.
Mushure mekurodha pasi aya mapakeji, tinogona kuaisa nekuita unotevera kuraira mune iyo terminal:
sudo dpkg -i cloudstack*.deb
Zvino mune nyaya yeCentOS 8, mapakeji ekurodha pasi anotevera:
sudo rpm -i cloudstack*.rpm
Kune mamwe maDebian kana CentOS / RHEL-based distributions, unogona kutevedzera rairo dzakapihwa Mune inotevera chinongedzo.
Asi iyo chete nhoroondo ndeyekuti iyo nyowani vhezheni haisati yaitwa kuti iwanikwe nenzira idzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Apache CloudStack 4.15 inosvika iine nyowani webhu interface, kugadzirisa uye nezvimwe
Proton, dhizaini nyowani inotangwa neMozilla muFirefox 90
Firefox 85 inosvika ichipatsanura network, ichipfura Flash Player uye idzi dzimwe nhau